သိန်း ၆၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Kylie Jenner ရဲ့ Handbag များ – FemaleWear.net
Kylie တင်လိုက်တဲ့ သူမရဲ့ handbag တွေထားရှိတဲ့ closet ပုံကြောင့် အားလုံးအံ့သြသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပုံကို like ပေးသူ7million ကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကတော့ သူမကို အားကျနေကြပြီး အိတ်တွေရဲ့ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို သိချင်နေကြပါတယ်။
Hermès Rare Limited Edition 30cm Black Dalmatian Leather Birkin Bag ကိုပါထည့်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ £350k လောက်ကို ရှိနေပါတယ်။ ဒါတောင် အိတ်တွေရဲ့ စုစုပါင်းခန့်မှန်းခြေစျေးနှုန်းသာ ရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လောက်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးလည်းနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ Stormi လေးကတော့ သူ့မေမေ Kylie ထက်ပိုကံကောင်းမယ့် ကလေးလေးများ ဖြစ်နေမလားနော်…?
Purse closet ? (3/10/18)
A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Mar 10, 2018 at 4:20pm PST
ဒါဆို bottom row မှာရှိတဲ့ အိတ်တွေကနေ စကြည့်လိုက်ရအောင်။ အောက်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ Louise Vuitton Mirror Alma အိတ်တွေဟာ တခုကို £1,600 အထက်မှာရှိပြီး Mirror Speedy အိတ်တွေကတော့ ခန့်မှန်းခြေ £900 အသီးသီးရှိပါတယ်။
This type of graffiti never hurt anyone! Speedy 30.? #ootd #louisvuittongraffiti #designerresale #lvlover #louisvuittonspeedy #designerresale #luxuryconsignment #luxuryresale
မျက်နှာချင်ဆိုင် bottom row မှာရှိတဲ့ Graffiti Speedy bag တွေကတော့ £1,100 ဝန်ကျင်ရှိပြီး Keepall Graffiti တွေကတော့ £1,777 ဝန်ကျင်မှာရှိပါတယ်။
Kylie ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ Louis Vuitton X Supreme အိတ်တွေရဲ့ တန်ဖိုး ကတော့ £9,000 ရှိပြီး အသေးတွေကတော့ £4k ဝန်ကျင်မှာရှိပါတယ်။
A post shared by SUPREME LOUIS VUITTON ? (@louisvuittonsupreme) on Jan 24, 2017 at 10:23am PST
အပေါ်မှာရှိတဲ့ Chanel အိတ် ၃အိတ်ကို တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လုံးကို £2000 ဝန်ကျင်လောက်ရှိပါတယ်။
Kylie ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ Gucci Dionysus bag ၄လုံးကတော့ တစ်လုံးကို £2000 ဝန်ကျင်ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် Kelly bag ၃လုံးကတော့ £6000 ဝန်ကျင်လောက်ရှိပါတယ်။
ဒီ အိတ် ၂၂လုံးကို ခန့်မှန်းခြေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် £57,200 ရှိပြီး အခန်းထဲမှာ စုစုပေါင်း အိတ် ၁၀၀ ဝန်ကျင်ရှိလောက်ရှိနေပါတယ်။ အိတ်တွေအားလုံးရဲ့ ခန့်မှန်းခြေကို တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ £230k လောက်ကိုရှိနေပါတယ်။
Tags: Chanel, Kylie Jenner, Louis Vuitton
၂၀၁၈ အတွက် America Fashion Designer Awards ဇကာတင်စာရင်းထွက်ရှိ